Umbhali uzochushisa abesifazane ngezamabhizinisi | Isolezwe
Umbhali uzochushisa abesifazane ngezamabhizinisi
intandokazi / 22 February 2018, 1:21pm / NOKUBONGWA PHENYANE
UZOCHUSHISA abesifazane abafuna ulwazi lokuthi bangakhula kanjani emabhizinisini, uMnuz Musa Zulu osezakhele olukhulu udumo ngokubhala izincwadi. UZulu kulindeleke ukuthi abe yisikhulumi sosuku aphinde acule emcimbini obizwa nge”Zenzele Mbokodo”, ohlelwa uNksz Shilex Shange. Lo mcimbi uzokuba ngoMgqibelo, eGallery of Faith, eThekwini.
Lo mcimbi uwenza ngokuhlanganyela noNkk Sithandiwe Khamanga ophethe isicoco sikazime, uMrs KZN Senior Citizens.
Elandisa Isolezwe ngalo mcimbi uNksz Shange uthe inhloso yawo ukuhlangana kwabesifazane bakhulisane emkhakheni wamabhizinisi, nangezinye izinto ezithinta impilo. “Lesi yisikhathi sokuthi abesifazane bavuke bazenzele, okunye okubalulekile wukuthi bazokhuthazana kwabona, kwazise badlule ezintweni eziningi ezingafani. Kulo mcimbi bazophinde babelane ngolwazi ngalokho abakwaziyo,” kuchaza uNksz Shange.
Ephawula ngalo mcimbi uZulu, uthe ukuthokozele kakhulu ukuba yisimenywa kuwo yize kungowabesifazane kuphela.
“Kukodwa engizokutshela abesifazane ngalolu suku, wukuthi konke kuyenzeka noma ungaba kusiphi isimo. Mina kuningi engikwenzile kwaphumelela yize ngiphila ngokukhubazeka njengoba ngihamba ngesihlalo,” kuchaza uZulu.
Uthe imbokodo ayiphume ngobuningi bayo njengoba kukuningi ezokuzuza ngalolu suku.
UNksz Shange uthe, kulo mcimbi izikhulumi zizobe zishumayela izwi lokuthi abesifazane bazenzele bangabheki ukwenzelwa ngoba ayikho into ebaluleke njengokuzimela.
“Sibone kungcono ukuthi sibize umuntu wesilisa azokhuluma ngezinto ezihlukene njengoba naye esemkhakheni wamabhizinisi. Umuntu onolwazi oluningi nesingangabazi ukuthi abazohambela lo mcimbi bayohamba umgodla wabo ugcwele ulwazi,” kuchaza uNksz Shange.
Uthe kulo mcimbi kuzongenwa ngoR100, nokuwumnikelo wokuba yingxenye yalo mcimbi.
“Ayifike ngobuningi bayo imbokodo kulo mcimbi njengoba ingeke izisole, kuzobe kusindwe ngobethole. Sekuyisikhathi sokuthi sikhulisane ngazo zonke izinto ukuze sikhule futhi sikwazi ukuzenzela singabesifazane,” kuchaza uNksz Shange.